यी सातको काँधमा प्रदेश ६ को ‘समृद्धि सपना’ – Sajha Bisaunee
यी सातको काँधमा प्रदेश ६ को ‘समृद्धि सपना’
कालिकोटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट १२ हजार एक सय ५३ मत ल्याएर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका पूर्व लडाकु हुन् । पार्टीमा ‘प्रज्वल’ उपनामले चिनिने शाही तत्कालीन जनसेनाको ६ नम्बर डिभिजनको कमाण्डर बनेका थिए ।
लडाकु भएर लामो समय युद्ध लडेका शाहीले संसदीय राजनीतिमा पनि फड्को मारेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जामन्त्री शाही प्रदेश नम्बर ६ को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शाहीले आफ्नो अबको सपना भनेकै यो प्रदेशलाई समद्ध बनाउनु भएको बताएका छन् । उनले अहिलेसम्म पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा रहेको यो प्रदेशलाई विकसित र नमुना बनाउने बताए । प्रदेश नम्बर ६ मा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत–साधनहरु भएको उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै जनताले चाहे अनुसारको विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
शिक्षकबाट सांसद हुँदै मन्त्री
प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
सल्यान स्थायी घर भएका प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीको दावीसहित प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव लडे । तर वाम गठबन्धनको भागवण्डामा प्रदेश नं. ६ को मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएपछि उनको उक्त सपना तत्काललाई पूरा नहुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा नभएपछि ज्वाला अहिले प्रदेश सरकारको निकै महŒवपूर्ण मानिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् । वि.सं. २०३९ सालको शिक्षक आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका ज्वाला नेकपा एमालेको जिल्ला कार्यालय सचिव हुँदै २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा समेत सल्यान क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी हाल नेकपा एमालेको पोलिट्ब्यूरो सदस्य छन् ।
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै आर्थिक विकास र समृद्धि भएकाले उक्त उपलब्धि प्राप्तीका लागि पहल गर्ने ज्वालाको भनाइ छ । उनले अहिलेपछि पछि परेको प्रदेश नं. ६ को विकास र समृद्धि नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने ज्वालाले बताए ।
दाबी मुख्यमन्त्रीको, भए ‘गृह’ मन्त्री
नरेश भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री
एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट जुम्ला जिल्लाबाट विजयी नरेश भण्डारी प्रदेश नं. ६ को मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी थिए । तर अन्तिममा पार्टीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् ।
वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका भण्डारी माओवादीको बुद्धिजीवि संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । २०५१ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा सक्रिय भण्डारी २०५६ सालदेखि भूमिगत भएका थिए । मन्त्री बनेपछि भण्डारीले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने बताउँछन् । उनले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउनुका साथै आम नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आइपुगेको भन्दै सबै मिलेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
सामाजिक विकासमन्त्रीको समृद्धि सपना
हुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै सांसद दल रावलले भनेका थिए, ‘सिमकोट–हिल्सा नाका मेरो प्राथमिकतामा छ, उक्त सडकलाई बाजुरा र मुगुको गमगढीमा जोडिनेछ, पाँच वर्षपछि गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिड्छु, गाडी चढ्ने अवस्था भएन भने चुनाव नै उठ्दिनँ ।’
उनै रावल प्रदेश नं. ६ को सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् । ६ नम्बर प्रदेशको विकास नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा भएको बताउने मन्त्री रावलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यहाँका नागरिकले हेरिरहेका छन् । रावल भने आफ्नो योजनामा दृढसंकल्पित रहेको भन्दै घोषणा गरे अनुसारको काम गरेरै छोड्ने बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारमा एक्ली महिला मन्त्री
बिमला केसी, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
प्रदेश नं. ६ को सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलकी एक मात्र महिला मन्त्री हुन्, बिमला केसी । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुन् । उनले भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । सुरुवातमा केसी उपसभामुख हुने चर्चा थियो । तर केसीले सक्रिय पद नै लिने अडान लिएपछि पार्टीले उनलाई मन्त्री बनाएको हो । प्रदेश नम्वर ६ को विकास र समृद्धिमा केही गरेर देखाउने आफ्नो योजना रहेकाले सक्रिय पद रोजेको उनको भनाइ छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको द्वन्द्वकालदेखि नै सक्रिय राजनीति गर्दै आएकी केसी आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँछिन् ।
आफूले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयको क्षेत्र यो प्रदेशका क्षेत्रका बहुसंख्यक जनतासँग जोडिएको हुनाले पनि आफूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने उनको भनाइ छ । आधारभूत रूपमा भूमि व्यवस्थापन, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन, सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने लगायतका काम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने केसीले बताइन् । योजनावद्ध रुपमा काम गरेर प्रदेश ६ लाई समृद्ध बनाउने आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने केसीको भनाइ छ ।
मेयर ताकेका बुढा बने मन्त्री
डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट कुल मतको ८२ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नन्दसिंह बुढा प्रदेश नं. ६ को पहिलो सरकारको मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने । मन्त्री बनेपछि डोल्पालीहरूमा खुशीयाली छाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको भण्डार मानिने कर्णाली र डोल्पा जिल्लालाई समृद्धि बनाउन मद्दत पुग्ने भन्दै डोल्पाली नागरिकले खुशीयाली मनाएका छन् ।
मन्त्री बुढाले पनि जनताले चाहे अनुसार जनताका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘प्रदेश ६ का सबै जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन’ उनले भने । लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा सक्रिय बुढा २०७० सालमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी डोल्पाका पार्टी सचिव बनेका थिए । सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेका उनले कम उमेरमै ठूला सफलता हासिल गरेको उनी निकटहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको दाबी गरेका बुढा पछि हटेर प्रदेशसभा सदस्यमा अत्याधिक मतले विजयी भएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी सांसद बने पूर्वाधार विकासमन्त्री
खड्गबहादुर खत्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
मूलतः निर्माण व्यवसायीहरुको रुपमा परिचित खड्गबहादुर खत्री सांसद हुँदै प्रदेश नं. ६ को भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका छन् । सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट निर्वाचित उनी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।
वि.सं. २०३४ सालदेखि राजनीतिक यात्रा थालेका उनी वि.सं. २०४९ र २०५४ सालमा भएका स्थानीय निकायका निर्वाचनमार्फत् तत्कालीन रामघाट गाविसका अध्यक्षमा निर्वाचित भए । व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक कार्य र राजनीतिमा सक्रिय उनी भलिबल र एथ्लेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य उनी नेकपा एमाले निकट नेपाल उद्योग परिषद्को समेत केन्द्रीय सदस्य हुन् ।